CUNTADA HRENOVUHI EE VODKA: SIDA LOO DIYAARIYO TINCTURE CLASSIC LEH MALAB IYO LIIN AT HOME, FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA, SIDOO KALE GURYAHA DAAWOOYINKA IYO CONTRAINDICATIONS - BEER CAGAARAN
Sidee loo daweeyaa fareemka on vodka malab iyo liin? Recipe ee tinctures, iyo sidoo kale dhan oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo waxyeelada
Tincture on malayga, haddii kale loo yaqaan malayga, ma qarnigii a waa mid aad u caan ah sababtoo ah guryaha bogsiinaya. Marar badan, malayga waxaa lagu magacaabaa aphrodisiac dabiici ah oo firfircoon. Hanti-cabbirkan waxaa lagu qaddariyay awoowayaasheenna fog. Shaki kuma jiro in hrenovochka dhadhan fiican leh iyo caafimaad qabta jidhka leh tamar muhiim ah oo gacan ka geysanaya rabitaanka cuntada oo kordhay. Iyo haddii aad raacdo xeerarka iyo isweydaarsiga ka dib marka cabitaan aan cabsi ku jirin! Cabitaanka xooggan ee leh dhadhanka gubashada dabiiciga ah ayaa dheeraaday tan iyo markii aan la gelin miiska, laakiin loo isticmaalo daawo ahaan. Sidee ayaad u diyaarin kartaa daawadan gaar ah guriga, iyo sida ay tahay in la qaato?
Faa'iidooyinka iyo waxyeelada tincture ee malayga
Waxaa lagula talinayaa in la qaato waa malayga cusub, kaas oo dhowaan qoday dhulka. Iyada oo qaab kale, rhizomes, goostay for jiilaalka, ayaa tagi doona, oo kaliya si maqaarka weli on iyaga.
Maqnaanshaha malayga cusub, waxaad isticmaali kartaa qalajiyey, qasacadeysan ama la qaboojiyey, laakiin aad fahamsan tahay in kiiskan, tincture doonaa lumin doonaa ay udgoon iyo waxyaabo badan oo faa'iido leh.
Kala xulashada ugu wanaagsan waxa weeye urta fiiqan iyo indhaha wax yar oo biyo ah, taas oo muujinaysa khudradda cagaarka ah, sidaas darteedna dammaanad qaadid natiijo wanaagsan.
Foornada waxaa loo isticmaalaa in lagula dagaallamo cudurrada faafa sababtoo ah kiimikada kiimikada qani ah:
fitamiinada kooxda B iyo C;
tannins iyo acid ascorbic;
carbohydrates (polysaccharides, arabinose iyo galactose);
ash, fiber, thioglycosides, borotiino, flavonoids;
macdanta macdanta (kalsiyum, sodium, birta, sulfur, copper, chlorine iyo fosfooraska).
Horseria dhirta, kaas oo malayga waa la diyaariyey, wuxuu leeyahay noocyo badan oo ka mid ah guryaha waxtar leh, laakiin in habka loo diyaariyo cabitaan, liiskan ayaa si weyn u cidhiidhisay.
Dhinaca kale Tincture-ka qudh ah iyo habka fayadhowrka ah wuxuu sababi karaa dhibaatooyin halis ah. Dadka qaba cudur kasta oo ka mid ah mareenka caloosha iyo mindhicirka, kelyaha, beerka ama qanjirka thyroid, waa inaad taxaddarisaa markaad cabbeyso cabitaanka mar walba la tasho dhakhtarkaaga. Haddii inta lagu jiro geedi-socodka wax lagu kariyo qalad waxyeello ah marka lagu daro qaybaha ugu muhiimsan ama qiyaasaha kale, waxaa jira khatar sare oo ah in gubasho loo geliyo xuubka xabka.
Sida aphrodisiac dabiiciga ah, oo la cabo cabitaan fareemka ah waxaa loo arkaa inay faa'iido u leedahay caafimaadka ragga, waxay kordhisaa rabitaanka cuntada, sidoo kale waxay bixisaa talaabo farxad iyo tamar. Faa'iidada ugu weyn ee tincture waa in la dagaallamo hargabka: qaybtaani waxay saameyn xun ku leedahay fayraska iyo bakteeriyada. Haddii aad cabto dhexdhexaad, ma jiri doonto xijaab. Intaa waxaa dheer, hrenovuha waxay keenaysaa wareegga dhiigga ee caadiga ah, wuxuu leeyahay saameynta anti-bararka iyo saamaynta duriinka.
Tincture oo tufaax ah malayga ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada soo socda:
xanuunada wadajirka ah;
Karsado iyadoo la raacayo qaamuuska hrenovuha caadiga ah oo kaliya qadhaadh. Marka uu jiro dareen xoog leh oo gubasho oo afka ah, tani macnaheedu waa in marxaladaha qaarkood xeerarka lagu cabo khamriga ayaa la jabiyaa ama u dhiganta qiyaasta malab iyo malayga.
Isticmaalka tincture guud ahaan waa ka horjeeda qaybaha noocaas ah sida:
hooyooyinka uurka leh iyo kuwa dhalmada nuujinaya inta lagu jiro nuujinta;
korodhka acidity gastric;
nabarrada iyo boogaha caloosha iyo mindhicirrada;
xasaasiyadaha iyo alaabooyinka alaabta;
caabuqa mareenka dheef-shiidka, beerka, kelyaha;
Cudur kasta oo cudurka ah.
Cabitaanada ku salaysan malayga oo ku jira tiro badan, wuxuu keeni karaa kororka dhiig karka, horumarinta dhiigbaxa gudaha iyo gubashada culus ee xuubka afka. Sidaa darteed, kahor intaan la bilaabin daaweynta guriga ee hrenovuha, waa lagama maarmaan inaad raadsato talo-siin takhasus leh isla markaana si adag u raaco talooyinka. Kadibna sifooyinka faa'iido leh ee warshadda ayaa sida ugu macquulsan u muuqan doona.
Sida loo sameeyo guriga: sifeyn u sameynta tincture malab iyo liin
Waayo, taas Si aad u diyaariso tincture ee malayga, waxaad u isticmaali kartaa sida vodka caadi ah, iyo kuwa kale oo isku mid ah. Khudradda lafteeda ma aha mid aad u badan oo ku saabsan qaybta ku xiga, taas oo u ogolaaneysa isticmaalka khamriga kale ee khamriga leh xoog kororka 40-50ºC. Inkasta oo la karinayo macaanka kariska caadiga ah waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda:
0.5 litir oo vodka ah (aalkolo ama moonshine);
1 tsp malab dareere ah;
7-10 cm xidid malayga;
2 tbsp. liin.
Haddii la rabo, basbaas, xididada xididdada, toonta, toon, roodhida, basbaaska, caleemaha dhulka, caleemaha currant iyo jeeriga ayaa lagu daraa malayga. Cuntooyinkaas la beddelay waxaa loogu talagalay kuwa jecel bucshirta: tincture caadiga ah malab waa wax aad u jilicsan. Isla mar ahaantaana, uma baahnid inaad ku darto wax walbo markasta, waxaa fiican inaad joojiso doorashooyinka 2-3 qaybood oo kala duwan oo tijaabi iyaga qaybo yaryar ah, gaaraya dhadhanka la rabo.
Markaad sharaxdo qaybaha ugu muhiimsan cabitaanka, waxaad sii wadi kartaa diyaarintiisa.:
Foornada waxay u baahan tahay in la nadiifiyo oo la gooyo wareegyada ama xabadaha cabbirka dhexdhexaadka ah. Inta badan la dhigo khudradda, waqti yar oo ay qaadato si loo yareeyo.
Waxaad xoqin kartaa asalka ah hargab weyn ama Booqday Furimaha Dagaalka, laakiin cabitaanka ayaa noqon doona mid tartan sabab u ah xaqiiqda ah oo ku siinaya ku dhowaad dhammaan juice.
Boorashka waa in lagu ridaa weel, ku dar malab iyo liin si aad weelka ugu riddo.
Ku shub dhammaan walxaha leh qadar yar oo ah vodka, si wanaagsan u walaaq iyo sare u qaad inta ka harsan khamriga.
Tincture keentay si taxadar leh u xaddidan iyada oo shaandho (cheesecloth ama filtarrada qaxwaha) iyo si adag u adkee weelka.
Ka tag meel mugdi ah oo qabow si aad u dillaacdo 3-4 maalmood, marmar furitaanka iyo isku dardar.
Waqtiga dheeriga ah waa mid aad u badan, gubasho badan ayaa soo baxday. Waa inaysan si weyn u badalin midabka, had iyo jeer ka baxsan xuduudaha midab huruud ah. Waa inaad sidoo kale isku daydaa inaad si joogto ah u tijaabiso: haddii xoogga dhadhanka uu yahay mid aad u qanacsan, waxaad ka saari kartaa malayga ka dib maalmo yar, adigoo keliya dareeraha, sababtoo ah faleebo dheer oo dhadhan qafiif ah ayaa laga yaabaa inuu muuqdo.
Waxaa habboon in la cabo cabitaan yar oo la qaboojiyo oo cabo hal qayb oo qayb ah oo aan ka badnayn 50 ml. Waxa uu leeyahay muuqaal xiiso leh - koror xoog leh oo rabitaanka cuntada ka dib marka la cabo 20-30ml. Haddii tincture loo diyaariyo ujeedooyin daaweyn, markaa waxaad u baahan tahay inaad qaadato 2-3 jeer maalintii daqiiqado yar ka hor cuntada. Muddada koorsada waxay kuxirantahay baaritaanka, laakiin badanaa waxay socotaa ilaa 2 asbuuc.
Si hrenovuha ilaa inta suurtagal ah sii haysan guryaha bogsiinaya, waxaa muhiim ah in si habboon u kaydiso guriga. Nafaqada cabitaanka waxay ku kala duwanaan kartaa 2 ilaa 5 sano. Bixinta natiijada la dhammeeyey waxay noqon doontaa meel qabow mug leh qoyaan fiican - qol ama qaboojiye. Haddii tincture la ilaaliyo oo uu leeyahay qadhaadh caan ah, ka dibna waxaa habboon in la cabbiro cabitaanka habka hababka soo socda:
biyo yar ku shub, oo waxay soo gaadhay qorrax ka soo baxa;
ku dar 1 tbsp. liin iyo malab;
ku dar vodka qaybo yaryar ilaa aad ka hesho dhadhan isku mid ah.
Horseria waxaa ku jira qaybo aan sugnayn oo uumi kacaya wakhti ka dib. Mudada dheer ee guriga-isku-darka waa la hayaa, inta badan lama arki karo dhadhanka iyo carafka qaybta ugu weyn. Sidaa darteed ku hay muddo ka badan 3-4 bilood hrenovuhu ma qiimo.
Waxaan soo bandhignaa si aan u daawano fiidiyo ku saabsan sida loo kariyo malayga:
In kasta oo ay jiraan faa'iidooyin badan, malayga ayaa leh dhowr khatarood oo muhiim ah.
Ka gudubka xeerka ama aan la raacin talooyinka isticmaalka tincture wuxuu waxyeeli karaa jidhka qaababka kala duwan ee waxyeelada.
Sida laga soo xigan karo sharaxaadda ficilada fayo-dhawrka, xadgudubka daroogada oo ku saleysan fareebka ama ka sarreeya qawaaniinta la oggol yahay waxay ka dhalanayaan cawaaqib xun:
dareen-celinta mareenka mindhicirka;
matag (badanaaba dhiig);
shuban iyo calaamadaha astaamaha gastroenteritis;
hyperemia ee maqaarka iyo gangrene.
Ka hor inta aanad isticmaalin daawada laguu qoray, waa inaad la tashataa takhtarkaaga.. Ma aha lagama maarmaan in la isku daro isticmaalka hrenovuhi daaweynta mukhaadaraadka leh daawooyinka kale ee leh levommiticin, maxaa yeelay malayga dhirbaaxaya saamayntooda.
Iyo xukunka ugu weyn - tincture this ma cabi karaa maalin kasta sida aperitif ah. Awoodda ay u leedahay inay rabto cunto yaryar waa in loo adeegsadaa si qumman, haddii kale khatarta ah in la xanibo dib u dhaca: lalabada iyo dhibaatooyinka kale ee nidaamka dheef-shiidka.
Horseria waa mid aad u fudud in la diyaariyo. Laakiin xitaa sida si fudud cabitaanka waa in loo adeegsadaa si qumman si aan naftaba wax u yeelin. Haddii tincture this aan lagu xadgudbin, ka dibna waxaa awood u leh inuu dib u soo celiyo caafimaadka hore ee ugu macquulsan iyo xitaa u adeegaan sida prophylactic aad u fiican cudurada badan.